TOOSHKA PTIMES:Hiigsigii Madaxweyne Denni & Loodintii Dhoobo Puntland maxay ka dhaxashay?
November 8, 2019 Mahad Jama 3
GAROWE(P-TIME)- Tan iyo bilowgii bishii October ee sanadkani 2019 oo ay bilowdeen xiisadaha u dhaxeeyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni iyo gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa waxaa ka socday gudaha magaalada Garowe ee caasimada hirdan iyo loolan adag oo u dhaxeeyey labada masuul.
Gudoomiye Dhoobo oo xiligaasi ka shidaal qaadanayey in deegaanada Puntland aan gacanta loo galiyey dowladda Imaaraadka Carabta oo heshiisyo kala duwan ay la gashay xukuumadda madaxweyne Denni ayaa u arkayey heshiisyadaasi meel marintooda in ay halis ku yihiin shacabka iyo dowladda Puntland.
Madaxweyne Denni oo isna faa’iido ay u ahayd meel marinta heshiisyada ay gashay xukuumaddiisu ayaa xooga saarayey sidii uu Baarlamaanka Puntland uga heli lahaa kalsooni buuxda si ay xildhibaanadu u meel mariyaan heshiiyada iyo mashaariicda ay kala saxiixdeen dowladda Imaaraadka Carabta oo maamushada dekadda Bosaso.
Heshiiyada Denni galay oo kala ahaaa wareeginta garoomada Boosaaso iyo Garowe, dhisida maxjar laga dhoofiyo xoolaha iyo sidoo kale maamulista shirkadda Korontada Boosaaso ayaa dowladda Imaaraadku ay ku siisay madaxtooyada galida heshiisyadaasi lacag dhan 22 Milyan oo Dollar, hasa yeeshee hirgalintooda oo ay ku xidhnaayeen codad uu ka helayo madaxweynuhu xildhibaanada Baarlamaanka ayaa gudoomiye Dhoobo uu kasoo hor jeestay kadib markii uu ku qanci waayey heshiisyadaasi oo dhankiisa u arkay kuwa gudoomiyuhu kuwo sababi kara dhibaatooyin xoogan soo gaadha shacabka Puntland taas oo sababtay in dagaal uu ka dhex qarxo labada dhinac.
Inkastoo xiisadaha dagaal ee u dhaxeeya gudoomiye Dhoobo iyo madaxweyne Denni ay soo jiitamayeen muddo dheer ayaa waxaa hadana Hoolka Baarlamaanka Puntland ee magaalada Garowe ka furmay 26-kii bishii October kalfadhigii 45-aad ee xildhibaanada Baarlamaanka oo uu kasoo qayb galay madaxweyne Denni, waxaana uu madaxweynuhu uu Hoolka Baarlamaanka ka jeediyey khudbad uu kaga hadlay arimo badan.
Sidii caadada u ahayd Baarlamaanka Puntland ayaa waxaa madaxweynaha la waydiiyey su’aal la xidhiidha dhanka amaanka iyo xaalada Puntland oo uu waydiiyey xildhibaan Cawil Xasan Daad oo kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka, waxaana su’aashaasi ay sababtay in madaxweynuhu uu si weyn u cadhoodo isagoona ugu dambeyntii ka baxay Hoolka Baarlamaanka kadib markii uu hadalo hanjabaad u jeediyey xildhibaankii waydiiyey su’aasha.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa iyaguna dhankooda markii uu soo dhamaaday kalfadhigoodii warbaahinta la hadlay, waxaana ay sheegeen in madaxweyne Denni uu jabiyey qodobo kamid ah dastuurka Puntland iyo xeerarka Baarlamaanka sidoo kalena uu u hanjabay xildhibaanada balse ay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan.
Su’aashii la waydiiyey madaxweynaha iyo kacdoonka xildhibaanada ayaa iyaduna noqotay nabar kale oo madaxtooyada Puntland soo gaadhay, waxaana xeer ilaalinta Puntland uu madaxweynuhu ka dalbaday in ay u gudbiso Baarlamaanka gal dacweed ka dhan Cawil Xasan Daad si xanaasanada xildhibaanimo looga qaado.
30-kii bishii lasoo dhaafay ee October ayaa xeer ilaalinta guud ee dowladda Puntland ay dacwad kusoo oogtay xildhibaan Cawil Xasan Daad, waxaana warqad kasoo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax lagaga dalbaday Baarlamanka in ay xasaanada ka qaadaan xildhibaan Cawil Xasan Daad si loogu soo oogo dacwad ciqabeed ku saabsan ku xad gudubka dastuurka iyo xeer hoosaadka Baarlamanka Puntland.
Dacwada xildhibaan Daad oo sii xoojisay xiisadii kala dhaxaysay Denni gudoomiye Dhoobo waxa ay isku badashay waji kale, waxaana xildhibaanada Baarlamaanku ay isku raaceen in meesha laga saaro dawcada xildhibaan Daad.
2-da bishani November ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta Baarlamaanka Puntland xildhibaanadu waxa ay kaga doodeen ajandayaal ay kamid yihiin heshiiyadii ay gashay xukuumadda madaxweyne oo xildhibaanadu ay isku af gareen in dibu eegis lagu sameeyo iyo in madaxweynaha su’aalo laga weydiiyo heshiisyada cusub, waxaana sidoo kale ay meesha ka saareen xildhibaanadu oo ay laaleen dacwadii xeer ilaalintu ka keentay xildhibaan Daad.
Kulankaasi oo ay ka qayb galeen 41 xudane ayaa waxa ay 39 xildhibaan oo kamid ahi ay u codeeyeen in xildhibaan Daad uusan wax dambi ah galin, iyadoona gudoomiye Dhoobo uu xiligaasi ku dhawaaqay in la laalay dawcadii Daad taas oo sii hurisay xiisadii ka dhex aloosnayd Dhoobo Daareed iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Denni.
Madaxweyne Denni oo wixii xiligaasi ka dambeeyey Mr. Dhoobo u arkayey cadowgiisa siyaasada waxa uu la tashi la sameeyey saaxiibadiisa ugu dhow oo ku qanciyey in Dhoobo Daareed laga keeno mooshin si xilka looga qaado uguna hirgalaan madaxtooyada qorshayaasheedii hore ee u hakaday codadka kalsoonida ah ee xildhibaanada Baarlamaanka.
C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo ka war helay qorshaha madaxtooyada iyo damaca kaga jira kursigiisa ayaa isna dhankiisa ka abaabushay koox ayidsan si uu mooshin uga keeno xukuumadda, taas oo dhabar jab ku ahaaan lahayd madaxweynaha oo hadii uu hirgalo mooshinkaasi waxa uu kala diri lahaa xukuumaddiisa hasa yeeshee madaxweyne Denni ayaa isku shaandhayn ku sameeyey gollihiisa wasiirada waxaana uu magacaabay wasiiro ku xigeeno, wasiiru dowlayaal iyo agaasimayaal ay keeneen xildhibaanada qaarkood, isagoona wakhtigaasi wixii ka dambeeyey labo u kala jabiyey Baarlamaanka Puntland.
Albaabo badan ayaa u furmay madaxweynaha, waxaana uu yeeshay saaxiibo cusub oo awood ku leh Hoolka Baarlamaanka si uu iskaga kala yareeyo cadaadiska Dhoobo iyo kooxdiisa, waxaana uu ugu dambeyntii go’aansaday in uu daaqada ka saaro gudoonka Baarlamaanka.
Isku dayo fashilmay kadib waxaa magaalada Garowe soo gaadhay isimo badan oo reer Puntland, waxaana dhanka magaalada Badhan ka yimid Suldaan Siciid Suldaan C/salaan oo kamid ah isimadda ugu awood badan gobolka Sanaag si uu u kala dhex galo labada hogaamiye, kadib markii uu ugu yeedhay madaxweyne Denni si uu u kala dhex galo isaga iyo gudoomiye Dhoobo balse saraakiisha madaxtooyada ayaa albaabka kasoo xidhay Suldaanka oo loo diiday la kulanka madaxweyne Denni.
Waan waan iyo dadaalo uu hor kacayey Islaan Ciise Islaan Maxamed oo helay xogta Suldaanka ee diidmada madaxtooyada ayaa ugu dambeyntii ku guulaystay in uu is hor fadhiisiyo madaxweynaha iyo Suldaan Siciid, waxaase madaxweyne Denni uu ku adkaystay mowqifkiisii ahaa in uu ka takhaluso gudoomiye Dhoobo.
Kulanka dhex maray Suldaan Siciid iyo madaxweyne Denni oo is mari waa kusoo dhamaaday kadib waxaa xigay dagaal lagu qaaday xarunta Baarlamaanka Puntland oo ciidamo taabacsan madaxtooyadu ay la wareegeen, waxaana dagaalkii xalay ka dhacay Garowe ku dhintay ku dhowaad Lix qof oo uu ku jiro agaasime ku xigeenkii laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya ee Puntland C/kariin Maxamed Dhaga weyne iyo ciidamo ka tirsanaa kuwa ilaalada xarunta Baarlamaanka Puntland.
Dagaalkaasi kadib waxa ay saraakiil ka tirsan madaxtooyadu gurmahooda kaga soo saxiixeen mooshin deg deg ah xildhibaano ka tirsan kuwa Baarlamaanka, kuwaas oo saaka codkoodii ku riday gudoomiye Dhoobo
Hadaba Hiigsigii Madaxweyne Denni & Loodintii Dhoobo Puntland maxay ka dhaxashay?
Dhanka deganaanshaha iyo wada noolaanshaha Puntland waxaa ku dhaqan dad badan, kuwaas oo qaarkood ay gabaad kasoo bideen dhibaatooyinka ka jira Koonfurta dalka Soomaaliya, waxaase muddooyinkii ugu dambeeyey ay gashay xaalad daganaansho la’aan ah iyo khilaaf siyaasadeed oo aad u cakiran.
Madaxweynaha Puntland oo aamisan fikirkiisa iyo talada saaxiibadiisa ugu dhow waa mid u dhaqma sida xukunada Kali taliska ah, waxaana tusaale inoogu filan dhibaatadii xalay ka dhacday Garowe iyo go’aanada adag ee kala fogaynaya bulshada ee uu qaato xili walba.
Inkastoo kooxda ku lamaan madaxweynaha aysan kaasoo muuqan warbaahinta marka laga reebo wasiirka Maaliyadda Puntland oo kamid ah xubnaha ugu fir fircoon hadana waa kuwo taagan daaha ka dambeeya madaxweyne Denni oo halkaas ayey wax ka maamulaan.
Ridista dagaalkii xalay iyo Dhoobo waxa ay Puntland ku noqon doontaa mid dhaawacda sumcadeeda, waxaana xukuumaddu ay sii fogaynaysaa oo gacanteeda ka bixi doona shacab badan iyo deegaano ay ku heshay miisaanka Dhoobo ee gobolka Sanaag.
Waxaa laga yaabaa in reer walba uu dhankiisa ka bilaabo jabhadaysi iyo in uu kasoo horjeesto dowladda taas oo boog ku noqon doonta xukuumadda madaxweyne Denni, waxaana fursadahaasi ka faa’iidaysan doona cadowga Puntland iyo dadka ka shaqeeya bur burinkeeda halka Puntland ay ubad dhaxaad u liyihiin isimo talo qabeen ah oo ka digtoon wax walba balse kaalintoodii kama aysan soo muuqan oo siyaasada ayey ku dhex milmeen.
Sumcada Puntland iyo in laysku aamino waayo nabad galyadeeda ayaa dhici karta maadaama xalayba dagaalku markii uu ka dhacayey Hoolka Baarlamaanka uu magaalada Garowe ku sugnaa safiirka dowladda Sweden u qaabilsan Soomaaliya, kaas oo madaxda dowladda Puntland ay sharaxaad ka siinayeen nabadgalyada iyo horumarka Puntland iyo sidoo kale xubno kala duwan oo ka hawlgala hay’addaha Samafalka ee ka shaqeeya deegaanada Puntland ayaa Garowe ku sugan, waxaana dagaalkaasi u soo jiidi karaa sumcad daro iyo in lagu kalsoonaan waayo.
Xukuumadda madaxweyne Denni ayaan rajo dambe iyaduna ka qabi doonin shacabka maadaama madaxweynaha oo jooga 10 Bilood durbaba kalsooni daro uu ku biiray shacabka Puntland oo marba marka kasii dambaysa sii nacaya.
Halgankii madaxtooyadu ugu jirtay kursiga Baarlamaanka waa mid fashil ka raacay kalsooni badana ay ku wayday.
W/Qoray Abdirahman Jama Hashi – (Abdirahman Wadani)
La soco qaybaha kale oo ka daalaco Puntlandtimes.com
Laakiin c/weli Gaas baa isba riday gudoomihii barlamaanka marka midna ma xalaal in la rido midna xaraan.
Waa 2 qalad, dadka Puntland na waa ku ceeb, dib u dhac iyo horumar in 21 sano ka dib madaxweyne kasta siduu doono u dhaqmo sharcigana la sareeyo.
Waa in la gaaro Faroole, Gaas iyo Deni dhamaan lala xisaabtamo, cadaaladduna dadka wada gaarto.
Hadii cadaalad aan la gaari karin maxaa Federal lagu dirtay.
Maxaa Federal lagu doortay.
Dalka marba in koox timaado oo siday rabto ka yeesho waa wax aan la aqbali karin.